ဝယ်ယူရေး/ကြေငြာများ | Community Driven Development Project
အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project- NCDDP) ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးများအတွက် စီမံကိန်း အကြံပေးဝန်ထမ်းများငှားရမ်းလိုပါသည်-	Read More »
The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) towards the cost of the National Community Driven Development Project (NCDDP). The IDA N° of the financing agreement is N° H814MM. The Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, in its role as implementing agency of the NCDDP, ...	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project- NCDDP) ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးများအတွက် စီမံကိန်း အကြံပေးဝန်ထမ်းများငှားရမ်းလိုပါသည်- (၁) Contract Management and Procurement Specialist Ref:(C.74) (၂၄)လ (၁)ဦး (၂) Logistics and Procurement Specialist Ref:(C.75) (၂၄)လ (၁)ဦ (၃) Procurement Specialist Ref:(C.58) (၂၄)လ (၂)ဦး (၄) Procurement Assistant/Trainer ...	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project_ NCDDP) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း hteelin152http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1680 kwanchangone96http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1681 kyauk-tan-100http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1682 matupi136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1683 nathogyi138sheethttp://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1684 pauk124http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1685 pyaw-bwe-160http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1686 pyinnana-70http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1687 saw136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1688 yame-thin-136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1689 Read More »
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project- NCDDP) ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးများအတွက် စီမံကိန်း အကြံပေးဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းလိုပါသည်- (၁) National Training Experts Ref:(C.65) (၂၄)လ (၃)ဦး (၂) National Assistant Trainers Ref:(C.66) (၂၄)လ (၇)ဦး (၃) National Project Accountant Ref:(C.71) (၂၄)လ (၁)ဦး လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအသေးစိတ်၊ မိမိလျှောက်ထားလိုသော ရာထူးနှင့် Reference နံပါတ်ကို တိကျစွာဖော်ပြ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာသို့ ...	Read More »
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (National Community Driven Development Project- NCDDP) ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးများအတွက် ပြည်တွင်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်/ ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းလိုပါသည်-	Read More »
Vacancy for Township Technical Assistant SHAN STATE
The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank to implement the National Community Driven Development Project (NCDD) under the Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. The Government intends to apply part of the Grant proceeds to hire consulting services for new townships to be covered starting ...	Read More »
The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) toward the cost of the National Community Driven Development Project (NCDDP). The Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture Livestock and Irrigation, in its role as implementing agency of the NCDDP, intends to applyaportion of the proceeds of this ...	Read More »
Page 1 of 41234	»	Project Overview